Ungasusa njani iingxaki zeTelegram | I-Androidsis
Ukuzalisa ngokuzenzekelayo kuye kwafumana ubukho kwi-Android ekuhambeni kwexesha. Le yinto echaphazela nezicelo esizifakileyo kwifowuni. Enye yazo, kwiimeko ezininzi, yiTelegram. Kukho abasebenzisi abakhoyo ukuhlangabezana neengxaki ngokugqibezela kwi-app. Kwimeko yakho yingxaki ekhethekileyo.
Ukusukela xa beza kubhala engxoxweni kwisicelo, xa ucofa kwiwindow yokubhaliweyo, kukho ukhetho oluzenzekelayo olunamanani efowuni kwabanye abafowunelwa. Ingxaki echaphazela abasebenzisi abaninzi beTelegram, njengoko kunokubonwa kwimisonto eyahlukeneyo kumaphepha anje ngeReddit. Iwebsite nayo Isisombululo sibonisiwe.
Akuthandabuzeki iyacaphukisa kakhulu abasebenzisi. Ukusukela lonke ixesha beza kubhala umyalezo kwi-app evela kwi-Android, bahlangabezana nale ngxaki. Yinto ke leyo egcina ikruqula kakhulu, ukongeza ekuveliseni usetyenziso olubi kwifowuni ngalo lonke ixesha. Kodwa ngethamsanqa sikhona isisombululo. Nangona inyani kukuba ingxaki ayihlali kwiTelegram. Endaweni yoko yiGoogle AutoFill (inkonzo egcwaliswe yinkampani) ebangela ukusilela kwesi sixhobo.
Kwi-Android, ngakumbi kwiinguqulelo zamva nje, sinenkonzo egqityiweyo kaGoogle. Into eqhelekileyo kukuba iza kusebenza kwiifowuni ezineenguqulelo ezinje nge-Android Oreo. Esi sesona sizathu sengxaki, esigcina sivelisa ukuphazamiseka kwizicelo ezinjengokuthumela imiyalezo. Nangona ukukwazi ukuphelisa ingxaki akunzima. Kuya kufuneka uguqule into ethile kuseto lwale nkonzo kwifowuni kwaye yiyo loo nto.
Lahla ingxaki yokuzalisa ngokuzenzekelayo
Ukusukela ekuphela kwento ekufuneka siyenzile kule meko, kukuya kuseto lwefowuni kwaye wenze utshintsho kuloo nkonzo. Ukuze iyeke ukubangela ukusilela kwiTelegram, kule meko ibonisa ezi nombolo zefowuni ngalo lonke ixesha ufuna ukubhala kwisicelo. Amanyathelo ekufuneka elandelwe awanangxaki. Kwimizuzu nje embalwa, le bug icaphukisayo ivela kwiapp kufuneka isonjululwe. Kufuneka senze ntoni kule meko?
Ngaphambi kokuqala, kubalulekile ukuba nini yiya kwenza oku, vala usetyenziso lweTelegram. Kule nkqubo asidingi sicelo nangaliphi na ixesha, ke kungcono ukuba siyivale. Ngawo onke amaxesha siya kusebenzisa useto lwefowuni yethu ye-Android. Amanyathelo ekufuneka elandelwe kule meko ngala:
Vula useto lwefowuni yakho
Yiya kuLwimi kunye nokukhethwa kokufakwa kokubhaliweyo (kwezinye iifowuni kukuseto oluphambili)
Khangela ukhetho lwenkonzo oluzenzekelayo (ngokungagqibekanga kuGoogle iyenziwa isebenze kwifowuni)
Ngenisa imenyu yale nkonzo
Khetha Akukho nanye (igama liyatshintsha kuxhomekeke kwifowuni)
Phuma kuseto lwefowuni
Uyenza njani ngokulula imiyalezo eneempendulo kwiTelegram. (Imiyalezo enamaqhosha)
Ngale ndlela, into esiyenzileyo yile khubaza inkonzo egcwalisa ngokuzenzekelayo kaGoogle, kule meko ibingasincedisi kwaphela xa usebenzisa iTelegram. Ukukhubaza, ingxaki kwi-app yokuthumela imiyalezo kufuneka ilungiswe. Le yinto esinokuyiqinisekisa ngokulula. Vula uvule iapp kwaye ubone ukuba kwenzeka ntoni xa ucofa kwibhokisi yokubhaliweyo. Ukuba konke kuhamba kakuhle, ezi nombolo zefowuni akufuneki ziphinde zivele.
Ngokwesiqhelo, le ngxaki isuswe ngokupheleleyo. Kwintambo yeReddit kubonakala ngathi isebenze kakuhle kuninzi. Ngelishwa, kunokuba kukho abasebenzisi abangakhange bagqibe ukulungisa le bug. Kule meko, kunokwenzeka ukuba inkonzo egqityiweyo kaGoogle yayingengonobangela wokungaphumeleli kwi-app, ebangela ukuba ezi nombolo zefowuni zivele xa uyisebenzisa kwifowuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ungazilungisa njani iingxaki ezigqityiweyo kwiTelegram